LED display video wall ၏ ၀ ယ်ယူမှုကိုဆွဲဆောင်နိုင်သောအချက်သုံးချက် - တရုတ်ထိပ်တန်း ဦး ဆောင်ဗီဒီယိုကိုမြို့ရိုးကိုစက်ရုံထုတ်လုပ်သူ
အခုတော့လမ်းပေါ်မှာ LED display screen ကိုငါတို့မြင်နိုင်ပါပြီ, ရင်ပြင်များ, ဖျော်ဖြေရေးနေရာများ, အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း, ရုပ်ရှင်ရုံ, ဘူတာများနှင့်အခြားနေရာများ. LED display screen ဘာကြောင့်ဒီလောက်နာမည်ကြီးနေလဲသိလား? ၎င်းသည်အရာအားလုံး၏မြင့်မားသောအရောင်လျှော့ချမှု၏အားသာချက်များမှယူဆောင်လာသောအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုမှလာသည်, အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှု, high definition နှင့်ခိုင်မာသောလိုက်ဖက်မှု.
ကုမ္ပဏီရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ဖို့နဲ့ပရိသတ်ရဲ့အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်ဖို့ပါ, ၎င်းသည်အလွန်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းဖြစ်သည်. လူတို့၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ခြင်းဖြင့်သာလျှင်ထုတ်ကုန်သတင်းအချက်အလက်ကိုပိုမိုလူသိရှင်ကြားပြသနိုင်သည်. LED display သည်၎င်း၏အလွန်ကောင်းမွန်သော display အတွက်များစွာသော display များတွင်ပေါ်လွင်သည်. ကြော်ငြာအတွက် LED display ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကြော်ငြာလုပ်ငန်း၌သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည်. မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ပေးပါ, ဖောက်သည်များ၏အဓိကလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပါ, နောက်ဆုံးတော့ပြောင်းလဲမှုနှုန်းကိုရရှိသည်.
LED display များလူကြိုက်များစေသောအချက်နှစ်ချက်ကိုကြည့်ကြစို့:
1. အလင်းအမှောင်သည်အချိန်မရွေးအကောင်းဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသရန်အလိုအလျောက်ချိန်ညှိသည်. ကြေငြာချက်တွင်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်အကောင်းဆုံးအရာသည်၎င်းကိုတောက်ပစေပြီးလူတို့၏မျက်လုံးကိုထိုးသည်, ဒါပေမယ့်တည်ရှိမှုသဘောမပါဘဲ display ကမှိန်နေပါတယ်. တောက်ပမှုကိုယ်တိုင်ချိန်ညှိခြင်း, ပတ်ဝန်းကျင်၏တောက်ပမှုနှင့်အညီသင်၏တောက်ပမှုကိုချိန်ညှိနိုင်သည်, မည်သည့်အချိန်မဆိုဆွဲဆောင်နိုင်သောအကြောင်းအရာများကိုပြသပါ.
2. ကျယ်ပြန့်အရောင်အစအဆုံး, တိကျသော display နှင့်စစ်မှန်သောအကြောင်းအရာ? အခြား display များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, LED display သည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအရောင် gamut ကိုပေးသည်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပုံအရည်အသွေးကိုပေးသည်.
LED display ရဲ့စျေးနှုန်းကမှန်ကန်တဲ့ display ကိုရွေးချယ်ရာမှာအချက်တစ်ချက်လား?